Sida loo horumariyo tayada Sheekooyinkaaga Instagram | Androidsis
Michael Hernandez | | Codsiyada Android, Sawir, Noticias
Sheekooyinka Instagram waxa ay noqdeen kuwa ugu jahawareerka badan sanadihii u dambeeyay ee shabakadaha bulshada, ilaa habkan ayaa lagu soo daray in aan si deg deg ah ula wadaagno nolol maalmeedkeena goobo aan tiro lahayn sida WhatsApp, Facebook iyo xitaa isku dayo fashilmay sida Twitter. .
Si kastaba ha noqotee, Sheekooyinka ama Sheekooyinka Instagram waxay leeyihiin xoogaa dhibaatooyin ah marka la eego tayada natiijada kama dambaysta ah ee aaladaha sida Android, wax madax-xanuun u keenaya isticmaaleyaasha la wadaaga macluumaadka aaladahan. Waxaan ku tusineynaa sida aad u horumarin karto tayada Sheekooyinkaaga Instragram ee Android.
1 Waa maxay sababta Sheekooyinka Instagram ay ugu muuqdaan kuwo ka xun Android?
2 Isticmaal kamarada telefoonkaaga gacanta
3 Kaamirooyinka kale, doorashada ugu fiican
4 Ha ka goyn sawirada codsiga
5 Duubista had iyo jeer 60 FPS
Waa maxay sababta Sheekooyinka Instagram ay ugu muuqdaan kuwo ka xun Android?
Shabakadda bulsheed ee ugu caansan waqtigan, Instagram, waa in ay maalin kasta gacanta ku dhigto sawirro iyo muuqaallo gaagaaban oo tiro badan oo aan la soo koobi karin, taasna waxay la macno tahay in ay dhammaan macluumaadkaas u maareeyaan qaab aan boos badan ka qaadanayn server. Sababtaas awgeed, Marka aan sawir ka qaadno ama muuqaalo si aan u samayno Sheekooyinka Instagram, kamarada codsigu waxay mas'uul ka tahay qaadista tillaabooyin si ay waxa la qabtay uga dhigo meesha ugu yar kaydinta suurtogalka ah. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, tani waxay si toos ah uga hor imanaysaa tayada nuxurka.
Waxaad qiyaasi kartaa in sawirka weyn ama fiidiyowgu uu ku jiro sababtoo ah waxay leedahay xallin sare ama waxyaabo la qabtay, taasina waxay dhibaato dhab ah ku noqon kartaa adeegayaasha Instagram. Sidan iyo si looga hortago dhibaatooyinkaas. Instagram ayaa mas'uul ka ah isku dhafka macluumaadkan in aan wadaagno.
Natiijo ahaan, In badan oo ka mid ah tayada sawir-qaadista ama fiidyaha ayaa luntay beddelka ah in si degdeg ah loo raro marka la baadhayo quudkayaga Instagram, si la mid ah in ay u badbaadiyaan kharash la taaban karo ee kaydinta.
Sababaha barnaamijka iyo sababo kala duwan oo saameeya horumarinta nidaamyada hawlgalka, waxaa soo baxday in tayada sheekooyinka lagu daabaco aaladaha Android ay bixiyaan natiijooyin ka xun kuwa lagu daabaco terminaalka iPhone, wax abuurayaasha ay ku tiirsan yihiin. sanadihii ugu dambeeyay. Weli waxaas oo dhan Waan xallin karnaa haddii aad raacdo taladayada si aad u horumariso tayada Sheekooyinkaaga Instagram.
Isticmaal kamarada telefoonkaaga gacanta
Mid ka mid ah beddelka ugu wanaagsan ee lagu xallinayo natiijada tayada sawireed ee Sheekooyinkayada Instagram waa si sax ah tag kamarada terminaalkayaga. Si kastaba ha ahaatee, halkan qalabyada terminalkeena ayaa si weyn uga faa'iideysan doona, taas oo ah, tayada kamaradda.
Haddi aynaan haysan telefoonada casriga ah ee Android ugu yaraan dhexda/sare, Way adag tahay inaan helno natiijooyin ka wanaagsan sababtoo ah waxaan isticmaalnaa kamarada asalka ah ee aaladdayada. Xaaladdan oo kale waxaan si fudud u qaadi doonaa sawirka oo aan si toos ah u aadi doonaa codsiga Instagram si aan toos ugu dhejino qaybta Sheekooyinka.
Xaaladdan oo kale, Waxaan sidoo kale kugula talineynaa haddii aad rabto inaad si toos ah uga sameyso gelintan kaydinta qalabkayaga, ka faa'iidayso fursadda aad ku samaynayso wax ka beddelka habboon Si aan u helno goobaha iftiinka ugu fiican iyo inta kale ee xuduudaha, si kastaba ha ahaatee, waxaad had iyo jeer awoodi doontaa inaad ku tafatirto sawirada miirayaasha Instagram u gaar ah, iyo sidoo kale ku dar dhammaan dhejiska ama hawlaha (sida muusikada ama faahfaahinta wakhtiga) si toos ah iyo dhibaato la'aan.
Kaamirooyinka kale, doorashada ugu fiican
Si kastaba ha ahaatee, ma haysano oo kaliya ikhtiyaarka kamaradda asalka ah ee qalabkayaga Android. Dhab ahaantii, aalado badan sida Samsung waxay leeyihiin nidaam dhoofinta u gaar ah si ay u hagaajiyaan tayada sawirka ee Sheekooyinka Instagram si toos ah iyada oo loo marayo lakabyada habaynta ee Android. Laakiin si kastaba ha ahaatee, Shirkado yar ayaa yaqaan sida loo sameeyo codsiyada sawir qaadista sida Google lafteeda.
Waxaan kugula talineynaa isticmaalka codsiga kamarada google gaar ahaan haddii aad haysato qalab dhexdhexaad ah ama mid hooseeya, maadaama ay hagaajin doonto natiijada xitaa marka aan haysanno qalab xaddidan.
Soo deji Google Camera
Soo deji kamarada furan
Waxaan mar labaad ku adkeysaneynaa in aaladaha Samsung Galaxy ay leeyihiin "Instagram Mode" kaas oo kuu ogolaanaya inaad si toos ah ula wadaagto waxyaabaha ku jira kamarada, iyo sida aan halkan ku sheegnay, waxaan awood u yeelan doonaa inaan ka faa'iidaysano natiijo ka fiican sawirada la helay.
Ha ka goyn sawirada codsiga
Haddii aad qaadatay sawir toosan (taas oo ah sida dhammaan sawirada loo qaado), ama aad rabto inaad xoojiso naqshadeynta sawirka, iska ilaali goosashada ama si toos ah uga ballaarin codsiga Instagram laftiisa. Way fiicantahay inaad isticmaasho tifaftiraha sawirka ku dhex jira taleefankaaga casriga ah ee Android ama aad si toos ah u rakibto codsiyada tafatirka sawirada.
Marka la jarjarayo sawirada, sida xaaladaha kale, Instagram ayaa ka faa'iidaysanaysa si ay u qabato cadaadis aad u sarreeya taasna waxay la macno tahay in pixels cabbir weyn ay soo bixi doonaan iyo sidoo kale muuqaalka muuqaalka oo ka soo baxa buuqa ka dhashay «zoom».
Waa inaad maskaxda ku heysaa taas Cabbirrada rasmiga ah ee Instagram ee qoraallada waa 600 x 400 px ee sawirrada toosan iyo 600 x 749 ee sawirrada toosan, markaa waa inaad sawirada u jartaa cabbirkaas. Sidaad aragteen, waa xallin aad u hooseeya, gaar ahaan haddii aan xisaabta ku darno xallinta sare ee shaashadaha mobilada iyo kumbuyuutarka ee maanta.
Duubista had iyo jeer 60 FPS
Xallinta sare iyo heerka FPS ee aan ku darno sheekooyinkeena, natiijada ugu dambeysa ayaa la arki doonaa, tani waa sababta oo ah isku-buufintu waxay leedahay xaddid, iyo haddii sawirka ama muuqaalku uu yahay mid tayo sare leh, iyada oo aan loo eegin inta ay isku dhejiso. waxaa laga yaabaa inaysan keenin natiijo xun. Xaaladdan oo kale, waxaan kugula talineynaa inaad ku duubto fiidiyowyada xallinta 4K haddii qalabkaagu kuu ogolaado, iyo dabcan had iyo jeer gudaha 60fps, sababtoo ah tani waxay ka dhigi doontaa daabacaaddu inay yeelato miisaan weyn oo sidaas darteed tayo sare leh inkastoo ay ku cadaadin karto si xad dhaaf ah Instagram lafteeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo horumariyo tayada Sheekooyinkaaga Instagram-ka
Oppo Find N: kani waa mobaylkii ugu horreeyay ee laalaabida summada
5-ta ciyaar ee xisaabta ugu fiican ee Android